XASAASI:Muuse Biixi oo helay hubkii ugu lacagtii ugu badnayd ee uu ku qabsan lahaa Badhan, Dhahar, Laasqorey & deegaano kale, jiida Tukaraq Iyo Laascaanood oo haawanaysa xili Denni….. – Puntlandtimes
XASAASI:Muuse Biixi oo helay hubkii ugu lacagtii ugu badnayd ee uu ku qabsan lahaa Badhan, Dhahar, Laasqorey & deegaano kale, jiida Tukaraq Iyo Laascaanood oo haawanaysa xili Denni…..
HARGEYSA(P-TIMES)- Xoggo hoose oo ay ka heshay Puntlandtimes.com aqalka madaxtooyada Somaliland ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay in hogaamiyaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka helay dowladda Imaaraadka Carabta lacago aad u badan iyo hub xoogan.
Muuse Biixi oo haatan qorshaynaya duulaan xoogan oo ka dhan ah deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ayaa bartilmaameedsanaya in uu gacanta ku dhigo magaalooyinka Badhan, Dhahar iyo Laasqorey oo ka tirsan gobolka Sanaag, waxaana dowladda Imaaraadka Carabtu ay ku heshiiyeen in ay qayb ka ahaato qorshaha duulaanka Biixi.
Qodobadii ay ku heshiiyeen Imaaraadka Carabta ayaa waxaa kamid ahaa in maamulka Somaliland uu Imaaraadku ka gacansiiyo bixinta qarashaad badan oo ku bixi doona ciidamada Somaliland iyo hub casri ah lagu taakuleeyo si uu gacanta ugu dhigi deegaano badan oo ka tirsan gobolka Sanaag.
Dhaqaalaha Imaaraadku bixinayo ayuu u isticmaali doonaa kala fur furida shacabka iyo waxgaradka gobolka Sanaag mana jirto jawaab ka dhan ah Somaliland oo weli Puntland ay ku dhawaaqday marka laga reebo malayshiyaad yar oo qorshaynaya dagaal ka dhan ah ciidamada maamulka Somaliland ee ku sugan qaybo kamid ah gobolka Sanaag.
Saraakiil cusub oo kasoo baxay Kuliyadaha tababarka ciidamada Somaliland iyo kuwo hore uga tirsanaa maamulka Somaliland ayaa ka hawlgali doona deegaano hoostaga deegaanada Jiidali, Awr Boogays, Yubbe iyo deegaano badan, waxaana maalmaha soo socda Yubbe booqan doona taliyaha ciidamada Somaliland General Nuux Taani.
Arintani ayaa timid kadib markii dowladda Imaaraadka Carabta uu ugu tanaasulay Muuse Biixi lacago xad dhaaf oo sanad walba laga qaadi lahaa, kuwaas oo ah kirada saldhiga Imaaraadka laga siiyey magaalada Ber-Bera taas badalkeedna waxaa Imaraadku uu u balanqaaday taageero walba oo uu uga baahdo in uu siiyo xukuumadda Biixi halka duulaanka deegaanada Puntland uu hor kici doono Imaaraadku si uu waji wanaagsan uga diyaarsado Biixi.
Dekadda Ber-Bera ayaa waxaa ka faa’iidaysan doona Boqolaal kun oo ganacsato Ethiopian ah iyo dowladda Imaaraadka Carabta maadaama laga dhaxal wareejiyey Somaliland isla markaasna dhawaan la bilaabi doono dhismaha wado ganacsi oo isku xidha Ethiopia iyo Ber-Bera si alaabta kasoo dagto loogu daabulo Ethiopia mana jirto faa’iid weyn oo kasoo gali doonta Somaliland ganacsiga iyo macaashka dekadda Ber-Bera oo haatan DP World ay sare u qaaday cashuurtii laga qaadi jiray ganacsatada.
Dhanka kale waxaa laga bilaabay deegaano ka tirsan gobolka Sool qorista malayshiyaad beeleedyo cusub oo ku biiri doona ciidamada Somaliland, kuwaas oo qoristoodu haatan ka socoto deegaanak Dhaban Saar oo dhaca dueleedka magaalada Laascaanood, waxaana qorshaha arintani lagu sheegay buuxinta jiidaha hore ee deegaanka Tukaraq maadaama Somaliland ay ciidamadeeda iskugu gayso hadba meesha ay duulaanka ku tahay xiligana ciidamadii ugu badnaa ay u rartay gobolka Sanaag.
Cabsi xoogan ayaa laga qabaa in Jabhaddo hor leh ay ka kacaan gobolka Sool magaalada caasimada ah ee Laascaanoodna waa mid waanaysa oo wax ciidan ah kuma sugna halka madaxweyne Denni weli go’aankeesu yahay mid aan cadayn xaalkuna waa mid faraha kasii baxaya.
HALKAN HOOSE KA AKHRISO QORAYAASHA BIIXI EE GOBOLKA SANAAG
XOG:Muuse Biixi oo Malaayiin Dollar ka dalban doona Imaaraadka Carabta & Qorshe Gaadiid dagaal lagu siinayo oo socda
WAR HADA AH: Tiknikadii & Ciidamadii ugu badnaa ee Somaliland oo meel walba harqiyey Iyo Xiisad cusub oo laga soo sheegay deegaanka….
DAAWO:Somaliland oo dagaalkii ugu cuslaa isku diyaarinaysa, Ciidamo kusii qul qulaya jiidaha hore Iyo Puntland oo ku dhawaaqday in ay….
Arimaha ciidanka iyo waxa dawlada Puntland u dehaan waa sir halkaana laguma soo qoro waana waxa looga qariyay dadka adiga website-kan Gaas qora ee niyada inuu ka jabiyo reer Puntland raba, waxanse dhowr jeered soo hore kuugu Sheehan hadana kuugu celinayaa mar kale in REER PUNTLAND ISKA CELIYEEN USC OO KA XOOG IYO TIRO BADNAYD SOMALILAND. hadaadan dhimana waa maqli doontaa qaylada la yeerta insha allah.
Adeerka Gaas usheeg reer Puntland toose.
Dollar masoo helin muuse biixi waayo maanta dollar ku wuxuu qiimihiisu sare u kacey SOMALILAND 22% halkii uu ahaa $100=7000 maanta wuxuu noqday $100=8500, sare u kacaas waxaa keenay cashier dheeraad ah oo lagu soo rogay alabta ka degaysa Berbera iyo ganacsatadii oo Friday.
Rumayso ama ha rumaysan gaajada ka jirta SOMALILAND meel ay ka jirto ma jirto.
BAHDII KA CARARE BELAAYAA BAHAL BAA CIDLA KU CUNA.